Ama-FAQs - Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Ingabe ungumkhiqizi oqondile futhi othumela ngaphandle ovela eChina?
Yebo, sikhona. Singumenzi wasendaweni we-OEM & ODM, sinomkhakha wethu wezimboni kanye noMnyango Wezentengiselwano Wezizwe Zonke.
Ikuphi ifektri yakho?
Ifektri yethu itholakala edolobheni lase-Yixing, eSifundazweni saseJiangsu, eChina. Kuthatha cishe ama-2hours ngesitimela esisheshayo ukusuka eShanghai Airport ukuya edolobheni lethu. Wamukelekile ngemfudumalo ukuthi uvakashele ifektri yethu nganoma yisiphi isikhathi.
Ngiyithenga kanjani impahla yakho?
Sicela usithumele imibuzo yakho (imininingwane, izithombe, uhlelo) nge-Alibaba, i-E-mail, uschat us. Futhi ungasinikeza ucingo ngqo ngezidingo zakho, sizokuphendula ASAP.
Isikhathi esingakanani sihola?
Kuthatha cishe izinsuku ezingama-25-30 ngemuva kokuba isampula liqinisekisiwe nediphozi litholile. Uma udinga izimpahla ngokuphuthumayo, sicela usitshele, futhi singazama konke okusemandleni ukukunika kuqala.
Ngingasithola kanjani isampula kuwe?
Uma sinesitoko samamodeli owadingayo, singakuthumela isampula mahhala ngqo. Kepha uma udinga i-CUSTOMISATION, kuzokhokhiswa izindleko zokusampula. Futhi zombili izindlela, umthwalo udinga ukukhokhiswa nguwe. Amasampula angathunyelwa nge-Fedex, UPS, TNT, DHL, ect.
Izimpahla zokukhiqiza ngobuningi, udinga ukukhokha idiphozi engama-30% ngaphambi kokukhiqizwa kanye nama-70% esele lapho kuthunyelwe. Indlela ejwayelekile iT / T kusengaphambili. Ibhalansi nge-L / C, i-DP ekuboneni nayo yamukelwa.
Ngingakwazi ukuhlola ikhwalithi yezimpahla ngaphambi kokulethwa?
Yebo, kungaba wena noma inkampani osebenza nayo, noma umuntu wesithathu wamukelekile efektri yethu ukuthi uyohlola ngaphambi kokulethwa.
Izimpahla zilethwe kanjani kimi?
Ngobuncane obuncane, sicebisa ukuletha nge-courier, njengoFedex, UPS, DHL, ect.
Ngobuningi obukhulu, sinikeza izeluleko zokuthumela ngomkhumbi olwandle. Singathumela izimpahla ku-Shipward Forwarder yakho oyabelwe (intengo ye-FOB). Noma uma ungenayo, singakwazi ukukucaphuna inani le-CIF.